Xirmooyinka Burushka Ilmada ee loogu talagalay Adobe Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Mid ka mid ah ilaha ugu badan ee la isticmaalay si loo abuuro halabuur hawooyin mugdi ama mugdi leh ayaa ah ilmada iyo dhibcaha dhiigga. Taasi waa sababta maanta aan u soo bandhigayo xirmadan oo ay ku jiraan noocyo badan oo burushyo ah oo loogu talagalay Adobe Photoshop oo ku dayanaya qaabka dareeraha ilmada. Sida iska cad, haddii aan si toos ah ugu dabaqno sawir ama sawir, ma lahaan doonaan wax la aqbali karo, sidaas darteed waxaa lagugula talinayaa haddii aad raadineyso natiijo macquul ah, inaad wax ka weydiiso habab iyo qaabab aad ku sameyn karto (isku darka qaababka iyo xulashooyinka waa goobo aad muhiim u ah in la adeegsado. muuqaal hufan oo la aamini karo) ama xitaa naftaada ku tijaabi xulashooyinka ay Photoshop na siiso. Waxay u badan tahay inaan ku arki doonno casharka fiidiyowga ee soo socda (waqti aad u yar sidoo kale). Waxyaabahan oo u muuqda kuwo aan muhiim ahayn waxay siin karaan muujinta iyo tayada weyn halabuurkeenna iyo shaqadeena astaamaha. Tan waxaa weheliya qurxinta dhijitaalka ah, qoraalka wanaagsan, iyo habeynta iftiinka wanaagsan waxay keeni karaan sawir aad u xoog badan oo aan waligood waxyeello u geysan doonin.
Xirmada soo socota waxay ku imaaneysaa qaab isku dhafan waxaadna kala soo bixi kartaa serverka 4Shared, in kastoo hadii dhibaato jirto, ila soo socodsii faallooyin waana badali doonaa iskuxirka (sida dhacday marar kale) Waxaan rajeynayaa inaad sida ugu badan ugu raaxeysan doontid oo aan ugu isticmaali doono halabuurkaaga Taariikhda Halloween ama mashaariic khiyaali ah.
Xirmooyinka Burushka Ilmada ee loogu talagalay Adobe Photoshop: (http://www.4shared.com/zip/s9oOSPnpce/2010092308__1_.html)
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Xirmooyinka Burushka Ilmada ee loogu talagalay Adobe Photoshop
Waxay ii sheegaysaa in xiriirku uusan ansax ahayn.
Faylka waa la tirtiray